Global Voices teny Malagasy » Filipina: Manome Voninahitra Ho An’ireo Maty Any Am-pasana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Novambra 2017 0:56 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
(Marihana fa efa tamin'ny volana Novambra 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mankalaza ny 1 Novambra ho andro hanajana ny olo-masina sy ny maty ny ankamaroan'ireo Filipiana Katolika. Satria maro amin'ireo Filipiana no mitsidika ireo hava-tiana efa maty any am-pasana, andro tsy fiasàna ao Filipina ny 1 Novambra.
Touched by an Angel  manoritsoritra ny 1 Novambra miavaka eny amin'ny fasana:
“Ho ahy, toa tahaka ny fetibe any an-tsekoly ny Fetin'ny Olo-Masina Rehetra, ankoatra ny hoe misy fasana, tranolay, latabatra fitsangatsanganana manerana ny fasana. Falifaly ny fihetseham-po eny am-pasana miaraka amin'ny ankizy mihazakazaka, lehilahy mpivarotra glasy mampaneno ny lakolosiny, mpivarotra taho miantsoantso hoe taho, ankizy milalao labozia miempo, tanora manao aterineto ao amin'ny SMART BRO, mpivarotra sakafo milahatra any anaty vahoaka. Fombafomba isan-taona ho an'ireo hava-tiana maminay, banga anay sy tsaroana mandrakariva izany. Indray mandeha isan-taona, mizara izany fifandraisana iarahana izany amin'ny fianakaviana manana havana efa maty izahay. “
Confessions of an Expat’s Wife , monina any Istambul, mba te hanao tahaka ity fomban'ny fianakaviana Filipiana ity:
“Matetika izaho sy ny fianakaviako mandeha eny amin'ny fasana amin'ny maraina ary mihaona amin'ireo havanay rehetra ao. Miandrandra izany matetika aho satria midika izany fa hifanena amin'ireo zanak'olo-mpiray tampo aho ary afaka hilalao miaraka amin'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, mandritra ny lalao, miandry sy manangona ireo labozia naempo rehetra izahay ary mivarotra izany amin'ny mpivarotra eny amin'ny manodidina. Mahatsiaro ireo fotoana tsara rehetra taloha niarahana tamin'ireo maty ireo zokinjokiny ary amin'ny hariva, mivavaka amin'ny “sapile” ho an'ny fanahin'ireo namanay sy fianakavianay efa maty izahay. “
Captain’s Log  miresaka ny fomba nibilaoginy teny amin'ny fasana. Bikoy  nandefa sary momba ny fomba nankalazana ny 1 Novambra eny ambanivohitr'i Filipina.
Filipino librarian  nanome rohy mirakitra ny tantaran'ny Halloween sy izay hahitana toerana mampatahotra any Filipina. Nostalgia Manila  manasongadina tantara malaza iray momba ny angatra ao an-drenivohitra izay ahitana ramatoa fotsifotsy ao Balete Drive. Araka ny filazan'ny olona fahiny, toerana ankafizin'ireo fanahy mirenireny sy ireo vondrona hafahafa ny hazon'i Balete. Iloilo City Boy mitantara ny fihaonany tamin'ireo angatra nandritra ny fampielezan-kevi-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2004.
Feisty Momma  indray tezitra noho ny fahitana ireo ray aman-dreny mijanona ao anaty fiara raha mandondona eny am-baravaran'ny olona rehetra ny ankizy mandritra ny Halloween. Mirehareha amin'ny fitafiny Halloween any am-piasana kosa i Scribbles. Mitantara ny fomba nanaovan'i Manila (renivohitr'i Filipina) ny fomba fanao tandrefana nandritra ny Halloween i Cathy Chronicles :
“Tamin'izaho mbola ankizy nandritra ny taompolo 70, tsy tena zava-dehibe loatra tahaka izao ny Halloween. Zava-mamitaka na zavatra tsara no zavatra novakianay fotsiny tamin'ny boky ary voafetra ho amin'ny filma na ny fahitalavitra ihany ny fety Halloween. Eny, niova tokoa ny fotoana ary lasa tandrefana tanteraka i Manila amin'ny fomba fanaony amin'ny fomban Halloween. “
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/08/110064/
 Touched by an Angel: http://aboutmyrecovery.com/2006/11/02/remembering-our-loved-ones/
 Confessions of an Expat’s Wife: http://suncatcherph.com/duke/nfblog/?p=240
 Captain’s Log: http://jepoyeng.blogspot.com/2006/11/skype-at-himlayang-pilipino-via-smart.html
 Filipino librarian: http://filipinolibrarian.blogspot.com/2005/10/halloween-libraries-and-philippines.html
 Nostalgia Manila: http://nostalgiamanila.blogspot.com/2006/10/mga-kuwentong-kababalaghan-ng-balete.html
 Iloilo City Boy : http://iloilocityboy.blogspot.com/2006/10/true-iloilo-scary-story.html#links
 Feisty Momma: http://feistymomma.djscharm.com/
 Cathy Chronicles: http://cathychronicles.blogspot.com/2006/10/pokemon-halloween-in-manila.html#links